DAAWO: Puntland oo ka hadashay Dad lagu dilay Laascaanood, kuna hanjabtay. – Puntlandtimes
DAAWO: Puntland oo ka hadashay Dad lagu dilay Laascaanood, kuna hanjabtay.
August 21, 2018 Puntland PL
GAROOWE(P-TIMES)- Ugu yaraan ilaa 2 qof ayaa dhintay labo kalena waa ay dhaawactay kadib markii ciidamada maamulka Somaliland ay rasaas xoogan ku fureen qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA
Dadkani la laayey ayaa waxa ay saarnaayeen Moto Bajaaj, waxaana rasaasta lagu furay xili ay hor marayeen hoyga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood gudoomiyaha ugu magacaaban maamulka Muuse Biixi gobolka Sool.
Abukar C/raxmaan Geelle ayaa ka hadlay dhacdadaasi, waxaana uu shaaciyey in Puntland ay ka jawaab celin doonto arimahaasi qaadi doontana dagaal ka dhan ciidamada Somaliland si ay uga qabsato gobolka Sool.